Football Khabar » बार्सिलोनाले मार्टिनेज भित्र्याउन तोक्यो ‘मूल्य’ : मान्ला त इन्टर मिलान ?
बार्सिलोनाले मार्टिनेज भित्र्याउन तोक्यो ‘मूल्य’ : मान्ला त इन्टर मिलान ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना आगामी समर सिजनमा नयाँ फरवार्ड भित्र्याउन गम्भीतापूर्वक लागेको छ । टोलीमा रहेका ३३ वर्षका उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेजको ‘उत्तराधिकारी’का रूपमा क्याटलान क्लबले ९ नम्बर जर्सी लगाउने नयाँ फरवार्ड भित्र्याउन कसरत गरिरहेको छ । त्यसका लागि उसले इटालियन क्लब इन्टर मिलानका युवा फरवार्ड लौटारो मार्टिनेजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको चर्चा छ ।
उमेरले हाल २२ वर्ष पुगेका अर्जेन्टिनी फरवार्ड मार्टिनेज मिलानका प्रमुख फरवार्ड हुन् । उनले जारी सिजन २७ खेलबाट १६ गोल गर्दै ६ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । बार्सिलोनाले उनलाई टोलीमा स्वारेजको आवश्यकता टार्न सक्ने खेलाडीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
यता, स्पेनका पछिल्ला मिडिया रिपोर्टअनुसार बार्सिलोनाले मार्टिनेजका लागि आन्तरिक कसरत अघि बढाएको छ । उसले समर सिजनमा खेलाडी अनुबन्ध गर्ने गरी मिलानका अधिकारीसँग छलफल थालेको हो । बार्सिलोना निकट पत्रिका ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’का अनुसार बार्सिलोनाले मार्टिनेजका लागि प्रारम्भिक मूल्यसमेत तोकेको छ ।
खबरअनुसार बार्सिलोनाले मिलानसँग मार्टिनेजका लागि ९३ मिलियन पाउन्ड अफर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । यो मूल्य युरोमा १११ मिलियन युरो हुन्छ, जुन मिलानले मार्टिनेजका लागि राखेको रिलिज क्लज बराबरीको रकम हो । अर्थात्, बार्सिलोना मिलानका स्टारका लागि रिलिज क्लज रकम तिर्न तयार छ ।
यता, केही समयअघि बार्सिलोनाले आफ्ना खेलाडीमाथि इच्छा बढाएपछि मिलानले मार्टिनेजसँग नयाँ सम्झौता गरेर रिलिज क्लज बढाउन लागेको खबर आएको थियो । मिलान यो समयका एक युवा स्टारलाई सस्तैमा बेच्न चाहँदैन । यता, मिलानका प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टे पनि मार्टिनेजलाई बेच्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । मिलानले यो सिजन खेलाडी भित्र्याउन मोटो रकम खर्चेकाले कोन्टे नयाँ सिजनको व्यापक तयारीमा रहँदा मार्टिनेज कोन्टेको योजनामा प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहेको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति २९ माघ २०७६, बुधबार १९:२८